Okufanele ukwenze lapho ingane inezibungu
Ukuhamba njalo, ukuhamba yonke indawo - umthetho, oqondiswa, mhlawumbe, nganoma yimuphi umama ngenkathi efudumele. Futhi ngenkathi izingane zixhaphaza nge-sandbox, ngezinye izikhathi asicabangi ukuthi yiziphi izingozi eziboshwe lapho. Ake sibone ukuthi yini okufanele yenze lapho ingane inezibungu.
Umntanakho udabuka ngokuzikhandla ngesikiki esesihlabathini esiseduze nabakhi abasha nabacwaningi, umama wakhe uphazamisa nabanye abomama ... Akukho lutho oluqeda lolu suku lwamaShayina olusasa kakhulu.
Futhi yini engabavimbela bonke ukuba bajabulele ukuhamba? Phela, bambalwa abantu abadala kulo mzuzu bacabanga ukuthi isihlabathi singcolile, kodwa uma umama ephenduka, ingane efuna ukubuza yona impela iyodonsa iminwe emlonyeni. Futhi lapho nangaphambi kokutheleleka ngezimpethu eziseduze.
Lokhu kusolisa kakhulu!
Ingane ingathatha izibungu hhayi kuphela kwi-sandbox, kodwa futhi ngokudla, ishaya ama-strawberries angahlanjululwa evela ensimini, noma inyama engcolile engcolile ... entwasahlobo nasehlobo, ingozi yokuguqula umzimba wakho ibe "indawo yokuhlala" yiyona ephakeme kakhulu, ngoba iningi lusuku izingane zichitha emoyeni omusha. Futhi izimo zezibungu, zithi, zindawo zokushisa - amaqanda ama-parasites angahlala emhlabathini isikhathi eside ngokulindela "abanikazi abanakho". Ngakho ungenzani, ungahambi futhi udle izithelo? Cha, kunjalo. Ungakhohlwa mayelana nezinyathelo zokuqapha, okuzoxoxwa ngezansi. Futhi ngaphambi kwalokho, ake sihambe izimpawu ezisolisayo, ezifakazela ukuthi izivakashi ezingakemenyiwe sezivele zizinzile emzimbeni wengane.
Lokhu kuboniswa yizibonakaliso ezilandelayo:
Ubuhlungu esiswini (i-paroxysmal, eduze nenkaba), isicashu, ukuhlanza.
Ukudwengula okukhulu kwengane, i-pallor, imivimbo ngaphansi kwamehlo.
Ukungabi nesifiso (ikakhulukazi ekuseni).
Okufanele ukwenze lapho ingane inezibungu - lo mbuzo ubuzwa umama ngamunye. Ukukhathala okusheshayo, ukucasula, ukulala nokukhathazeka ngokulala nokulala emanzini (amakhemikhali akhiwa ngenxa yomsebenzi obalulekile wezibungu emzimbeni, avuselele izikhungo zesibindi ebuchosheni, okwenza ukuqubuka kwemisipha ye-masticatory).
Ukunambitha ku-perineum ne-anus. Ngezinye izikhathi izibungu zibangelwa izifo ezivuthayo ezingxenyeni zomzimba zamathumbu kanye nomzimba (yebo, imbangela yezifo emntwaneni, ikakhulukazi "engaqondakali", ngaphandle kwesizathu esicacile futhi esiphikelelayo, engasabeli, kungase ibe yizifo eziphazamisayo). Esivivinyweni segazi jikelele, ukuba khona kwezibungu kuboniswa izinga eliphakeme lama-eosinophils (amangqamuzana egazi aphethwe ukuvikela umzimba ngokungena kwamanye amazwe).
Thola futhi unqande
Yiqiniso, akukho ukusola okwanele okwenziwe ukuxilongwa. Ubuhlungu obufanayo besisu noma izibungu ngaphansi kwamehlo kungaba izimpawu zezifo eziningi. Ngakho-ke, uma izimpawu ze-malaise zivela, ingane kufanele ibonane nodokotela. Nakuba ukuthola izidumbu, ngisho nodokotela akulula kakhulu. Isimo sithuthukiswa yiqiniso lokuthi ngokuvamile ukutholakala kwabo emzimbeni kuqhubeka ngokungajwayelekile. Njengomthetho, ngokusola izimpethu umntwana uthunyelwa ukuhlaziywa (ukuhlaziywa kwezinhlanzi ze-egg-worm). Kodwa ukuze kutholakale izivakashi ezingahambelwanga, udinga ukulandela imithetho ethile. Okokuqala, sidinga "impahla efanele" (esanda kuqoqwa), futhi okwesibili, ukuhlaziywa akukwenzeki kanye kodwa izikhathi ezingu-3-5 (ngekhefu leviki, kucatshangelwa umjikelezo wokuthuthukiswa kwezibungu kanye ne-protozoa). Futhi ngale ndlela, umphumela akuzona njalo iqiniso. Ngakho-ke, abanye odokotela bezingane batusa, kungakhathaliseki ukuthi bahlolwa, ukwenza izifundo zokuvimbela kabili ngonyaka. Amalungiselelo anamuhla ngokumelene nezinambuzane aphephile ngokuphelele: ayengeyona enobuthi, enza izinambuzane endaweni, emathunjini.
Yini okufanele ngiyenze uma ingane yami inezibungu? Ungahlanganyeli emisebenzini ye-amateur, kodwa uthintane nodokotela bese ulandela izincomo zokwelashwa zakhe. Amakhambi omphakathi, njengejuroti juice (30-50 ml ngosuku), imbewu yamathanga, i-garlic, ama-walnuts, igromegranate, isitibheleji zasendle, ingabhekwa njengendlela eyisizayo yokulwa ne-helminthiasis.
Ungaphatheki kahle ukushaywa kwesibungu. Uma izibungu zingasusiwe, zingabangela ukudakwa okujwayelekile komzimba futhi ziphulukise izifo ezingelapheki zomuthi wamathumbu. Udokotela uzohlinzeka ngemithi. Ukuphulukiswa okuyingxenye kwenzeka kakade ekudleni kokuqala kwemithi, kepha ukuthola ukwelashwa okuphelele kuyadingeka ukuba ufunde inkambo ephelele, bese uyiphinda (izikhathi ezingu-2-3 ngekhefu lamasonto amabili). Ngendlela, uma i-helminths itholakale enganeni, kunengqondo ukudlulisa inkambo "yokuhlanza" kuwo wonke amalungu omndeni - ukuze ugweme ukutheleleka kabusha. Naphezu kobumnyama bomfanekiso odwetshiwe, kubalulekile ukuphawula ukuthi imvelo enempilo inganqoba ama-parasite yedwa. Kodwa ulwa kuphela uma ingane ihlala izitho zangaphakathi, ikakhulukazi umgudu wamathumbu. Kuze kube manje, yebo, lokhu kunalokho okuhlukile kunomthetho.
Imithetho emihlanu yezempilo
Akukwanele ukuphilisa ingane yokuhlasela kwe-helminthic futhi ukukhohlwa ngokuphepha mayelana nokuhlangenwe nakho kokubi, yiba uqaphile. Ukuze wenze lokhu, landela imithetho emihlanu yokuvimbela.
Geza izithelo, imifino kanye nemifino ngaphansi kwamanzi agijima, ikakhulukazi lezo ingane ezodla ngayo. Ungamvumeli adle izithelo ezingcolile. A amajikijolo ezikhula eduze nezwe, udinga ukuthululela amanzi abilayo noma unqume ikhasi labo.
Fundisa ingane yakho izinsisekelo zokuhlanzeka komuntu siqu: geza izandla zakho njalo ngangokunokwenzeka, ungathathi iminwe emlonyeni wakho, njll.
Ngokuvamile ushintshe umbhede (kanye ngesonto) kanye nezingubo zangaphansi zansuku zonke (nsuku zonke) zengane.
Njalo sebenzisa ukuhlanza okumanzi endlini, ungakwazi kanye nokuhlanza okuncane.
Kabili ngonyaka, thatha izifundo zokuvimbela izimpungushe.
Ngokuvamile bakholelwa ukuthi entwasahlobo kunomkhuba wokwandisa zonke izifo umuntu anayo. Lokhu okuyingxenye kuyiqiniso. Kodwa ngezinye izikhathi entwasahlobo ziqala ukuzwa abantu abaphilile nabanempilo.
Isizathu sezinkinga zethu eziningi zezempilo kungaba ukutheleleka kwe-helminthic. Ukuphazamisa emzimbeni wethu nokudla okudingekayo ukuze kube nokuphila okugcwele, imbungu isithintela izakhi ezidingekayo ukuze siphile ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, izibungu zikhulula imikhiqizo enobuthi yomsebenzi wabo obalulekile. Lezi zinyamatane ziyingozi emzimbeni wethu, zibangele ukusabela okweqile, ukukhushulwa kwezifo zomuthi wamathumbu kanye nezinkinga ezilula zokugaya, njengokubhubhisa, isifo sohudo, noma ukuqothulwa.
I-glist ingena emzimbeni womuntu ngesimo se-larva (kusuka ezandleni ezingcolile, kusuka enyameni yezilwane ezinesifo kanye nezinhlanzi, ezivela ezilwaneni ezifuywayo) futhi, njengoba sezijwayele, ziba umuntu omdala. Ngenxa yokuthi imbongolo idonsa ikhono layo ngaphansi kwezibonakaliso zezinye izifo, kunzima ukuthola futhi ukhethe ikhambi layo. Ngaphezu kwalokho, uhlobo olulodwa lwesibungu (naseRussia kunamaphesenti angaba ngu-30!) Kunqunywe ukuhlaziywa okukhethekile.
Yingakho isidakamizwa se-antihelminthic sezinyathelo eziningi ezenziwe. Kusebenza ngokulinganayo kuzo zonke izinhlobo eziyaziwayo zezibungu kuzo zonke izigaba zokuthuthukiswa kwazo - kusukela ku-larva kuya ku-worm omdala. Ukwelashwa okuvimbelayo kuphela izinsuku ezintathu kuphela (eyodwa tablet ngosuku) - futhi singaqiniseka ukuthi sizohlangana entwasahlobo ngaphandle kwama-parasites.
Ukudla kukuthinta kanjani impilo yengane?
Kunokuba uphulukise umkhuhlane ingane
Amavithamini wezingane ezingaphansi konyaka owodwa
Ukutheleleka okuqondile ngokuqondile: i-tetanus
Ingane encane ivame ukugula
U-Prokhor Chaliapin wavuka evikela uVerka Serduchka
I-Horoscope ngo-Okthoba 2017 - owesifazane-ama-Aries - avela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Ikhukhamba juice nezinzuzo zayo
Imithetho eyi-10 yokunakekela ingane esanda kuzalwa
I-popovery e-Orange (buns ezingenalutho)
Yiba nomumo ngisho nasezinsukwini ezinamafu
Indlela yokwenza ikhasi lakho lomuntu siqu kwisayithi lokuthandana likhangise kakhulu
I-salmon ye-Pink ku-batter
I-Focaccia nge-cherry ne-rosemary
Ukufaneleka ngokweminyaka: yikuphi ukuvivinya umzimba okufanelana nawe?
Indlela yokuba umama omkhulu noma ukubamba konke
Inhlama ebisiwe ebisi